नेपाल र मरिससबीचको खेलमा दर्शकलाई प्रवेश अनुमति – News Portal of Global Nepali
12:28 PM | 5:13 PM
Activity - Insert animated GIF to HTML
नेपाल र मरिससबीचको खेलमा दर्शकलाई प्रवेश अनुमति
26/01/2022 मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मरिससबीचको खेलमा दर्शकलाई मैदानमा प्रवेशको अनमुति दिइने भएको छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै एकतिहाइ दर्शकलाई मात्र खेल हेर्न मैदान पस्ने अनुमति दिइने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले जनाएको छ । नेपालले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा मरिसससँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ । मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न मरिससको फुटबल टोली नेपाल आइसकेको छ । पहिलो खेल माघ १५ गते तथा दोस्रो खेल माघ १८ गते हुने तय भएको छ ।
एन्फाले दर्शकलाई खेल अवलोकन गर्न सामान्यतर्फ प्रति व्यक्ति रु पाँच सय र भीआईपीतर्फ रु एक हजार टिकट दर कायम गरेको छ । मरिससविरुद्धको मैत्रीपुर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले आज खेलाडीको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्नुहुने भएको छ । एक सातादेखि ३४ खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन् ।
नेपाल आएपछि पिसीआर परीक्षण गर्दा मरिससका चार खेलाडीमा कोरोना देखिएको छ । चारै जना हाल आइसोलेसनमा छन । रंगशाला प्रवेशका लागि सबैलाई कोरोनाविरुद्धको खोपकार्ड अनिवार्य गरिएको छ । खेल साँझ पौने पाँच बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
न्युक्यासलसँग पराजित आर्सनललाई गम्भीर धक्का
दिल्ली चौथो स्थानमा उक्लियो
श्रीलंकामा पेट्रोल हाहाकार
नेपाल युगान्डा दोस्रो खेल खेल्दै, शृंखला बराबर गर्ने मौका
१९१४९	पटक पढिएको
एनआरएनएको बदनाम गर्ने आइसीसी सदस्य बिक माथि कार्यवाही हुने
१४७६८	पटक पढिएको
कोरोना सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने दुई नेपालीलाई लण्डन विमानस्थलमा जरिवाना
१३४१२	पटक पढिएको
हित्रो बिमानस्थलमा काम गर्ने बुबा र छोरीको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु
१३२३६	पटक पढिएको
बेलायतबाट आएका ५ नेपाली विमानस्थलबाटै फिर्ता
११४०२	पटक पढिएको
‘एनआरएनए यूकेमा चार करोड रुपैयाँको हिसाव गोलमाल’
RUN BY: AMALACHAUR MEDIA NETWORK (AMN)
Registration No: 236274/076/077
Head Office Address: Syuchatar - 2, Kalanki, Kathmandu, Nepal
Editorial Team :
Founder Chief Editor: Chiran Sharma
Sub-Editor: Dharmaraj Adhikari
Multimedia Editor : Meelan Sharma
News Coordinator (USA): Kiran Marahatta
Reporter (Nepal): Saru Paudel
Contact: [email protected],
Tweets by nepalbritain
आगामी स्थानिय निर्वाचनका कुन पार्टीको बहुमत आउछ ?
Nepalese Rupee Exchange Rate
Copyright © 2020 NepalBritain. All rights reserved.